Sikwethulela uSarah Vaughan, iNdlovukazi yeJazz – Bayede News
Sikwethulela uSarah Vaughan, iNdlovukazi yeJazz
USarah Vaughan owayedume ngelika “Sassy”
Posted on 12 July 2019 12 July 2019 by Bayede-News
USarah Vaughan owayedume ngelika “Sassy” noma bamteketise bathi, “The Divine One” ngomunye wabaculi beJazz abadume umhlaba wonke. Waphumelela amaGrammy izikhathi zaze zazine weleka ngeLifetime Achievement. Kwathi ngonyaka we-1989 wagixabezwa ngeNEA Jazz Master’s Awards. Omunye wabagxeki ngokwakhayo kumaciko abadumile uScott Yannow uma echaza uSarah wathi, “Unephimbo eliphole kubo bonke ayecula nabo kukhulunyaka lama-20.”
Wayeyindodakazi ka-Asbury “Jake” Vaughan owayengumdlali wopiyano nesiginci yize ngokomsebenzi ayephilisa ngawo umndeni wakhe wayengumbazi. Ngenxa yokuthi uyise kaSarah wayekhonze kakhulu izindaba zevangeli impilo yomndeni yamataniswa kakhulu nesonto iNew Mount Zion Baptist Church lapho uSarah aqala khona ukucula ekhwayeni wafunda nokudlala upiyano uma ikhwaya okwakucula kulo unina u-Ada lizilolonga noma kunezinkonzo.
Eseyiqhumamponjwana waqala ukudlala upiyano ePicadilly Club naseNewark Airport okwalandelwa wukungenela izifundo zomculo eNewark Arts High School eyavulwa ngowe-1931. Lapha wayeseqalile uSarah ukudlala kusihlwa ezindaweni zobumnandi nokwamenza washeshe wasifulathela isikole wabhekana ngqo nokuba wumculi okhokhelwayo.
USarah Vaughan uchazwa njengomculi owayenezwi elihle ngendlela engavamile. Wayecula indlela yokuqala isoprano ayekwazi ukuyiphenduphendula ayenze ibaritone yabesifazane. Esekhulile eseminyakeni engama-60 wayesakwazi ukuphakamisa izwi lakhe alinciphise libe yicoloratura sengathi kucula umuntu osemncane ngeminyaka. Empeleni umculi odumile uFrank Sinatra wathi uma emchaza uSarah wathi, “USassy indlela emtoti acula ngayo ingenza ngifise ukuziseceza izihlakala ngensingo ebuthuntu.” Kanti uJohn S. Wilson owayengumgxeki wamaciko esebenzela iNew York Times wabeka kanje ephawula ngoSarah ngowe-1957, “USassy unezwi cishe elimtoti kunawo wonke esengake ngawezwa emculweni ijazz.” Isifundiswa sezomculo uHenry Pleasant waphawula wathi, “UVaughan unekhono elingandile lokwehlela kucontralto D aphinde kalula enyukele phezulu kusoprano c. Ezikhulumela ngokwakhe uSarah Vaughan wabeka kanje: “Angazi ukuthi yini abantu bangibize ngomculi wejazz. Mhlawumbe bangimatanisa nayo ngoba ngakhulela kuyo eminyakeni eminingi eyedlula. Angiyibukeli phansi ijazz kodwa angiyena umculi wejazz kodwa ngicula lonke uhlobo lomculo … engifisa ukukwenza ukuqopha yonke inhlobo yomculo ngoba ngiwuthanda ngokungakhethi,” kuphetha uVaughan.
UVaughan wazuza imiklomelo emikhulu emculweni. Nge- albhamu yakhe esihloko sithi, “Sarah Vaughan with Clifford Brown” ihambisana nesingili esihloko sithi, “If you could see me now” yangeniswa ku “Grammy Hall of Fame.”Ngowe-1985 uVaughan wazuza inkanyezi ku “Hollywood Walk of Fame” okuwuphawu lokuhlonipheka okukhulu endimeni yezomculo. Ngonyaka we-1988 uVaughan wangeniswa ku-“American Jazz Hall of Fame.” Ngowe- 1978 iBerklee College of Music yamhlonipha ngeziqu zobudokotela (Honorary Doctorate of Music).ISan Fransisco and Berkerly eCalifornia yaguqula usuku lwama-27 kuNdasa lwaba yiSarah Lois Vaughan. Miningi eminye imiklomelo eyazuzwa nguSarah Vaughan empilweni yakhe yezomculo.
Baningi abaculi abadumile abancoma igalelo likaVaughan empumelelweni yabo kwezomculo. Kubona kukhona laba abalandelayo: u-Anita Baker; uPhoebe Snow; uSade noRickie Lee Jones.Abaculi oCarmen McRae noDianne Reeves baqopha ama-albhamu behlonipha uVaughan emva kokudlula kwakhe emhlabeni. Enye yayisihloko sithi, “Sarah: Dedicated to You” (1991) enye ithi, “The Calling: Celebrating Sarah Vaughan” (2001).
Ezinye izingoma uSarah Vaughan adume ngazo kujazz yilezo ezifana ne “Ain’t misbehaving”, “Stormy weather”, It might as well be spring” nezinye.USarah Lois Vaughan wazalwa zingama-27 kuNdasa we-1924 eNewark, New Jersey e-United States of America. Wadlula emhlabeni zi-3 kuMbasa we-1990 eHidden Hills, eCalifornia e-United States of America.Wayeneminyaka engama-66 edlula emhlabeni kanti ubalwa nabesifazane abaphambili abangama-75 abaletha ukuhlonipheka kwaboHlanga e-United States of America (USA).